औकात भन्दा माथि उठ्ने संकल्प - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ साउन २२ गते २१:३४ मा प्रकाशित
जीवनका भिन्न भिन्न कालखण्डमा भिन्न भिन्न मानिसहरुले गरेका भिन्न भिन्न अनुभुतिका आधारमा सफलताको अर्थ पनि भिन्न भिन्न नै हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। जस्तै कसैका लागि नाम कमाउनु, कसैका लागि पैसा कमाउनु त कसैका लागि प्रतिष्ठा। यसैगरेर एउटा विद्यार्थीका लागि परीक्षामा प्रथम आउनु सफलता होला भने खेलाडिका लागि कुनै खेल जित्नु। त्यस्तै एउटा नेताका लागि चुनाव जित्नु सफलता होला भने कुनै प्रेमि-प्रेमिकाका लागि कसैको मन जित्नु/विश्वाश जित्नु, आदि। साधारणतया कसैले गरेको प्रयास सार्थक हुनु या कसैको सपना साकार हुनुलाई नै सफलता प्राप्त भएको मान्ने गरिन्छ। खैर, यो लेखमा खास गरेर हिजोआजका हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सम्म एउटा प्रेरक सन्देश शेयर हुन सकोस भन्ने उदेश्यले सफलाता र यो संग जोडीका केही प्रेरक प्रसङ्गहरुका बारेमा तल चर्चा गर्ने कोशिश गरेको छु। (श्रोत: ‘एक्सेलरेटिङ् आइडियाज’ मोटिभेसनल टक प्रोग्राम)।
यदि अहिले दशौं वा बाह्रौं क्लासमा अध्ययन गर्दै गरेका हाम्रा भाइबहिनीहरुलाई सफलता के हो भनेर सोध्ने हो भने, के कस्ता जवाफहरु आउन सक्लान भनेर हामी थोरबहुत अनुमान लगाउन त सक्छौँ नै। कल्पना गर्नुस् कुनै दुरदराज गाउँकी एकजना बहिनी दु:ख गरेर स्कुलको पढाई सक्छिन्, घर परिवारको राम्रो सपोर्ट नहुँदा नहुँदै पनि शहर जान्छिन् दु:ख गरेर पढ्छिन् (मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज्ममा स्नातक तह सम्मको पढाई पुरा गर्छिन्) र लगत्तै कुनै प्रतिष्ठित टिभि च्यानलमा न्युज रिडर/एंकर को रुपमा जब गर्ने अवसर प्राप्त गर्छिन्। अब हामीले यि बहिनी र अहिलेको चल्तिको हिरो अनमोल केसीको सफलतालाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने, कसलाई बढी सफल भएको मानौला? पक्का पनि हामी धेरैले एंकर बनेकी बहिनीलाइ नै ज्यादा सफल मान्ने छौँ। किनकी अनमोल केसीलाई प्राप्त भएको सफलता जति स्वाभविक छ, ति बहिनीको केसमा भने परिस्थिति धेरै नै फरक हुन्छ। तर पनि उनले त्यो गरेर देखाइन जसको बारेमा उनको परिवार, आसपासका मानिस वा उनको त्यहाको समाजले सोचेकोको पनि हुँदैनथ्यो। अर्थात सुरुमा उनको बारेमा जे अनुमान गरिएको थियो, उनले त्यो भन्दा धेरै गरेर देखाइन । अझ भन्नु पर्दा आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाइन।
यसै सिलसिलामा यहाँहरुलाई म अर्को एउटा उदाहरण सुनाउछु। यहाँहरुले भारतका अहिलेका एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नोभेलीस्ट, राइटर, मोटिभेशनल स्पिकर चेतन भगतको नाम त सुन्नु भएकै होला। साथै उनले लेखेका अंग्रेजी नोभेल बाट बनेका हिन्दी फिल्म टु स्टेट, हाफग्रल फ्रेण्ड, आदि यहाँहरु मध्ये धेरैले हेर्नु पनि भएको होला। चेतनले भारतको आईआईटी दिल्लीबाट इन्जिनियरिङ र आइआइएम अहमदावादबाट एमबीए गरेका छन्। यहाँहरु मध्ये कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, उनले एसएसएलसी (हाम्रोमा एसइई भनिन्छ) पास गर्दा उनको मात्र ७६% (B+) मार्कस आएको थियो, जुन उनको परिवारले अपेक्षा गरेको भन्दा निक्कै कम्ती थियो। हरेकका आमाबाबुहरुले जस्तै चेतनका आमाबाबुले पनि हाम्रो छोराको ९०% (A+) भन्दा माथिको मार्कस आओस् ताकि भोली गएर छोरालाई इण्डियाका टप आईआईटी कलेज बाट इन्जियरिङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त हुनसकोस्। तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुन सकेन, जसका कारण रिजल्ट आएको दिन बेलुका चेतनको घरको माहोल शोकमग्न थियो, सबैको मुहारमा बादल छाएको अवस्था थियो। राती खाना खान बसेको बेला चेतनका मामाले चेतनकी आमलाई सान्त्वना दिदै भन्छन्, यसको औकात नै यति नै थियो, चिन्ता गर्नु पर्दैन आफ्नो औकात बराबरको केहीनकेही त गरिहाल्छ नि। यो सुनेर चेतनले पनि मनमनै अब बरु एसटीडी आईएसडीको टेलिफोन बुथ खोल्नु पर्‍यो भन्दै योजना बनाउछन्। तर भरे फेरी सोचे, अहिले म भर्खर १५ बर्षको हुँदैछु। अझै त केही पनि बिग्रीएको छैन। यदि कुनै संकल्पका साथ मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने हो भने, म अझै पनि आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाउन सक्छु। त्यतिखेर सम्म उनलाई अब अगाडि कहाँ पढ्ने, के पढ्ने भन्ने बारेमा खासै जानकारी पनि हुँदैन। त्यसैले सबै भन्दा पहिला त यसका बारेमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छन्। यसै सिलसिलामा उनले पत्ता लगाउछन्, भारतमा सबैभन्दा राम्रो कलेज भनेको आईआईटी हुने रहेछ र त्यसमा एड्मिसन पाउन भने धेरै नै कठिन हुने रहेछ। उनले कसरी हुन्छ अफुलाई यसका लागि तयार पार्ने निर्णय गर्छन्, जसका लागि उनीसंग दुई बर्षको समय हुन्छ। उनले संकल्प गर्छन्, यो दुई बर्षको अवधिमा आफुलाई यसरी तयार पार्ने छु ता कि आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाउन सकियोस्। यहीं सोच र संकल्पका साथ चेतन आफ्नो अगाडिको पढाई सुरु गर्छन्। यो क्रममा उनको जीवानमा पनि कयौं अप्ठ्यारा परिस्थितीहरु आउछन्, तर उनि कहिल्यै बिचल्लीत हुदैनन्। आफ्नो संकल्प अनुसार लक्क्ष प्राप्तिका लागि लागातार मेहनत गर्छन्। फलस्वरूप बाह्रौं क्लासको अध्ययन पुरा गरेसंगै ईन्जिनियरिङ् पढ्नका लागि इन्ट्रान्स इग्जाम दिन्छन्, पास गर्छन् र भारतको टप आईआईटी कलेजहरु मध्येको आईआईटी दिल्ली बाट ईन्जिनियरिङ् (मैकेनिकल) र आइआइएम अहमदावादबाट एमबीए गर्छन्। (सन् २०१० मा अमेरिका बाट प्रकाशित हुने टाइम म्यागजिनले त्यो सालको विश्वका एकसय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नेमलिस्टमा चेतन भगतको नाम पनि राखेको थियो)।
खैर, माथिका कथाबस्तु त केवल प्रतिनिधि पात्रका रुपमा लिएका उदाहरण मात्र हुन्। हाम्रो आफ्नै गाँउ शहर लगायत देश बिदेशमा हेर्ने हो भने यस्ता कयौँ पात्रहरु भेट्ने छौँ, जसले जीवनमा काठिन भन्दा काठिन परिस्थितीमा पनि आफु प्रतिको दृढ़ विश्वास र संकल्पलाई कायम राख्दै लागातार मेहनत गरेर आ-आफ्नो स्तरमा आफ्नो औकाता भन्दा माथि उठेर देखाउन सफल भएका छन्। अत: मुलरुपमा हाम्रा परिवारजन, गुरुजन, आसपसका मानिस, लगायत हाम्रो गाँउ समाज देशले हामी बाट जे जति अपेक्षा राखेका हुन्छन् त्यो भन्दा धेरै गरेर देखाउन सक्नु अर्थात आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाउन सक्नु नै साँचो सफलता रहेछ भन्ने कुरालाई माथि उल्लेखित उदाहरणले यहाँ सिद्ध गरेको छ।
यहाँ सम्मा हामीले यो त बुझ्यौँ कि सफल बन्नका लागि आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाउन सक्नु पर्ने रहेछ। तर सबै भन्दा मुस्किलको कुरा, अब आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्ने कसरी? औकात भन्दा माथि उठ्न त्यती सजिलो त छैन। घरमा आमालाई दुई तीन दिन खान बनाउन सघाएर अथवा दुई चार हप्ता लगातार बुवालाई अन्य कुनै काममा सहायता गरेर त आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्न सकिदैन। किनकी घरमा गर्नु पर्ने यस्ता कामहरु, गर्ने मन नहुँदा नहुँदै पनि, आरे गर्न यार, एक दुई घण्टाको कुरा न हो त्यस पछी फेरी टिभि हेरौला, फेसबुक/व्हाट्सएप चलाऊला भनेर आफुलाई टेम्परेरीली मोटिभेट (धक्कामार मोटिभेसन) गरेर पनि गर्न सकिन्छ। तर आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्नका लागि त कुनै निश्चित समय सम्माका लागि लगातार मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ। कसैले धक्का लगाएर अथवा फोर्स गरेर थोरै समयका लागि गरिने मेहनतले यहाँ काम गर्ने वाल छैन। यसका लागि एक दुई घण्टा/दिन हैन, एक दुई बर्ष नै लगातार कडा मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ, हैन त? जब हामीले यो कुरालाई आफ्नो अन्तर आत्मा बाट महसुस गर्छौ/बुझ्छौँ। अब अर्को महत्वपूर्ण स्टेप भनेको लक्ष्य निर्धारण गर्नु हो। अब यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कसरी? अब हेर्नुस्, भन्न त घरमा आमाबुवाले तिमी डाक्टर बन्नु पर्छ, इन्जिनियर बन्नु पर्छ, पायलट बन्नु पर्छ, वकील बन्नु पर्छ, फलानाको छोरा/छोरी त बन्यो भने तिमी किन बन्न सक्दैनौ, आदि कुराहरु भन्नु/सुनाउनु हुन्छ। तर घरमा आमाबुवाले भनेर मात्रै त यो सम्भव हुँदैन, हुन्छ त? निश्चित रूपमा पनि हुँदैन। अनलेस तपाईं एक्दमै जिनियस हुनुहुन्छ, जसका लागि केही पनि असंभव नहोस्। यदि त्यसो होइन भने त जे पनि बन्नु छ यसका लागि आवश्यक मेहनत गर्ने भनेको त तपाईंले नै हो। त्यसैले अब तपाईंले यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईं संग भएको ज्ञान तथा तपाईंको रुचिका आधारमा कुन बिषय/कोर्स तपाईंका लागि उत्कृष्ट हुन सक्छ, जुन पुरा गर्दा आफुलाई आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेको अनुभुती हुनसकोस्। यो संगसंगै त्यो बिषय/कोर्स पढ्नका लागि कुन कलेज सबै भन्दा राम्रो हुनसक्छ यसको बिषयमा पनि जानकारी हासिल गर्नु पर्दछ। अब फाईनल स्टेप, जब यि सबै कुराहरुका बारेमा यहाँहरुलाई राम्रो संग जानकारी प्राप्त हुन्छ, अब यसै अनुरुप आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुस्। अब यो लक्ष्यलाई आफ्नो सपना बनाउनुस र यसलाई हकिकतमा परिणत गर्नका लागि कती समय आवश्यक पर्ने हो, यसै अनुरुप एउटा निश्चित समय अवधि पनि निर्धारण गर्नुस् र संकल्प गर्नुहोस् यो निर्धारित समयाअवधि भित्र यसलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पुरा गरेर छोड्ने छु, यो संकल्प पुरा नभए सम्म मेरा लागि अरु केही पनि महत्त्वपूर्ण छैन/हुनसक्दैन। यसको मतलब, यहाँ तपाईंले राम्ररी बुझ्नु भएको छ, जुन लक्ष्य तपाईंले निर्धारण गर्नु भएको छ, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ‘धक्कामार मोटिभेसन’ ले काम गर्ने वाला छैन। जब यो बुझाईका साथ मानसिक रुपले तयार भएर आफ्नो लक्ष्य अनुरुप मेहनत गर्न सुरु गर्नु हुन्छ, तपाईंलाई आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्न सक्ने सफलता हासिल गर्न बाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आज यो लेख्दै गर्दा म स्वयम सोच्दैछु, कास यहीं कुरा मैले मेरो समयमा बुझ्न सकेको भए अथवा कसैले मलाई बुझाई दिएको भए सम्भवत म पनि आफ्नो ठाउमा आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्न सफल हुने थिए होला।
खैर, यदि यहाँहरु चेतनले जस्तै जीवनमा आफ्नो औकात भन्दा माथि उठ्ने संकल्प गर्नु हुन्छ अर्थात अरुले सोचेको भन्दा पनि राम्रो गरेर देखाउने लक्ष्य राख्नु हुन्छ (यस्तो लक्ष्य पढाईमा मात्र हुनु पर्छ भन्ने हैन, तपाईंहरुको रुचि अनुसारको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ)। त्यसो हो भने आजै बाट आफ्नो संकल्प र लक्ष्य अनुरुप कडा मेहनत गर्न सुरु गर्नुस्, यहाँहरु पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो औकात भन्दा माथि उठेर देखाउन सफल बन्नु हुने छ। सबैमा शुभकामना!